Barcelona Oo Ku Guulaysatgay Champions Leaque-ga Kadib Guul Ay Kagaartay Juventus +Sawiro+Video | Wardoon Wardoon.net - Somali News
Barcelona Oo Ku Guulaysatgay Champions Leaque-ga Kadib Guul Ay Kagaartay Juventus +Sawiro+Video
Kooxda Barcelona ayaa ku guulasyatay koobka kooxaha Yurub ee Champions Leaque-ga kadib markii ay kulankii finalka ee Berlin ay ku dubatay kooxda Juventus, waxayna Barca sidaa ugu guulaysatay koobkeedii shanaad ee Champions Leaque-ga iyada oo noqotay kooxda kaliya ee xili ciyaareedkan ku guulaysatay saddexdii koob ee ay u tartamaysay. Luis Enrique ayaa barbareeyay Pep Guardiola oo xili ciyaareedkiisii ugu horeeyay saddexda koob ku guulaystay.
Barcelona ayaa guushan ku gaadhay 3:1 waxaana goolasha ay guusha ku gaadhay ukala dhaliyay Ivan Rakitic, Luis Suarez iyo Neymar oo ciyaarta soo gabagabeeyay.Andres Iniesta ayaa loo doortay inuu ahaa xidiga garoonka ugu fiicnaa.
Indhaha aduunka oo dhan ayaa ku soo jeeday finalka Champions Leaque-ga ee kooxaha Juventus iyo Barcelona ku dhex marayay magaalada Berlin ee dalka Germany.Kadib markii ay kooxaha Barcelona iyo Juventus ay halgan dheer u soo galeen inay soo gaadhaan finalka Champions Leaque-ga ayaa koox kastaaba ku fikiraysay inay xili ciyaareedkan saddexda koob ku guulaysto.
Juventus ayaa finalka Champions Leaque soo gaadhay markii ugu horeysay muddo 12 sannadood ah, waxaana ay raadinayaan inay ku guuleystaan inay Champions Leaque-ga markii seddexaad ku guulaystaan.
Barcelona ayaa iyaduna isha ku haysa inay ku guulaysato koobkeedii shanaad ee Champions Leaque-ga iyo waliba koobkeedii afraad ee Champions Leaque-ga muddadii tobanka sano ahayd ee ugu danbaysay.Koobka ay labada kooxood u tartamayaan ayaa diyaar ku sii ah garoonka iyada oo marka ay ciyaartu dhamaato si rasmi ah loogu qori doono magaca kooxda koobka xaq u yeelan doonta.Garoonka ayaa ciyaarta ka hor lagu qabtay xaflada furitaanka oo aad loosoo agaasimay.
Allegri ayaa sidii la filayay goolkiisa ku bilaabay Buffon isaga oo difaacana kawada ciyaarsiiyay Lichtsteiner, Barzagli, Bonucci iyo Evra, khadka dhexe ayay kuwada bilawdeen Marchisio, Pirlo, Pogba iyo Vidal halka weerarka Old Lady ay hogaamin doonaan Carlos Tevez iyo Alvaro Morata.
Dhinaca Barcelona Luis Enrique ayaa sidii caadada u ahayd goolkiisa ku bilaabay goolhaye Ter Stegen waxaana difaaca Barcelona ka wada ciyaari doona Alves ,Piqué, Mascherano iyo Alba, waxaana khada dhexe qaybsan doona Rakitic, Busquets iyo Iniesta oo kulankan taam u noqday. Weerarka Barcelona ayaa sidii la filayay ay hogaamin doonaan Messi, Suarez iyo Neymar.
Ciyaarta ayay labada kooxood ku bilawdeen qaab cabsi ah oo ay kubbda luminayeen iyada o Mascherano uu ka mid aha ciyaartoyda Barcelona ee qaladaadka bilawgii ciyaarta sameeyay ee naxdinta kulaylka finalka Champions Leaque-ga. Barcelona ayaa si gaabis ah u bilawday inay markiiba kubbada cagta ku dhigto.
Kadib markii muddo labada kooxood isku dayayeen inay fahmaan qaabka ciyaarta ayay Barcelona heshay fursada ay hogaanka kula wareegtay iyada oo uu Ivan Rakitic kooxdiisa goolka furitaanka udhaliyay daqiiqadii 4 aad wuxuuna ciyaarta ka dhigay 1:0 ay Barcelona hogaanka kula wareegtay.
Lionel Messi ayaa kubbada cajiib ah ka soo tuuray dhinaca midig waxaana si layaableh kubbada u maamulay Jordi Alba wuxuuna kubbada isku dhaafiyay Neymar kaas oo isaguna si deg deg ah kubbada ugu sii dhiibay Iniesta oo xerada ganaaxa Juventus ku jiray, Iniesta ayaa hadiyad goolka ugu hor dhibay Rekitic kaas oo kubbada ku dhamaystiray darbo uu lugta bidix ku dhubtay waxaana kubbada goolkiisa sii booqanaysa daawanayay Buffon.
Juventus oo markii hore difaaca inta badan ku bilaabatay ayaa markiiba bilawday inay weerar qaado isla markaana waxay isku dayday inay ka gilgilato goolka looga hore maray ee ay Barcelona kaga naxsatay.Ciyaarta ayaana noqotay weerar iyo weerar helis ay inta badan labada kooxood isku qaadayeen.Barcelona ayaa rekoodhe ku dooday kadib markii uu Lichtsteiner kubbada gacan ku taabtay isaga oo xerada ganaaxa kooxdiisa ku jira laakiin garsooraha ayaan waxba tilmaamin.
Laakiin daqiiqadii 15 aad ayay Barcelona ku sigatay inay hesho gookeeda labaad kadib markii uu Dani Alves helay fursad dahabi ah oo gool loo fishay kadib markii uu Suarez kubbada fiican ugu dhiibay xerada ganaaxa Juventus laakiin Buffun ayaa sameeyay badbaadin lala yaabay oo muujisay tayada halyaygan wuxuuna kooxdiisa ka ilaaliyay goolka niyad jabka isaga oo sameeyay badbaadin cajiib ah.
Alvaro Morata, Marchisio iyo Vidal ayaa dhamaantood fursado fiican helay laakiin dadaalkooda ayaan noqon mid lagu faa’iiday iyada oo Marchisio uu kubbada gantaal ah oo qurux deeda layaabay uu ku sigtay inuu gool ku dhaliyo, laakiin Juventus ayaa markeeda daqiiqadii 37 aad rekoodhe ku dooday kadib markii uu Jordi Alba qalad ku galay Pogba laakiin markale ayuu garsooruhu iska indho tiray dooda ciyaartoyda iyada oo Ciyaartoyda Juventus ay si wayn ugu soo xoomeen garsooraha.
Neymar ayaa banaan ka helay dhinaca bixid iyada oo Lichtsteiner uu inta badan fursad fiican siiyay Neymar kaas oo u muuqday inuu dhibta ugu badan ku abuurayay Juventus, laakiin Luis Suarez ayaa dhamaadkii qaybtii hore ee ciyaarta helay laba fursadood oo fiican iyada oo fursada ugu halista badnayd uu Buffon si fiican iskaga badbaadiyay.
Qaybta hore ee ciyaarta ayaa ahayd mid xiiso badan isla markaana ay labada kooxoodba soo bandhigeen qaab ciyaareed fiican inkasta oo ay Barcelona ahayd kooxda gacanta sare lahayd natiijo ahaan iyo waliba ciyaareen ahaan. Barcelona ayaa afar bartilmaameed samaysay qaybta hore halka Juventus ay hal nartilmaameed heshay.
Markii layskugu soo laabtay qaybtii danbe ee ciyaarta ayay markiiba Barcelona heshay fursad ay ciyaarta ku dili gaadhay iyada oo kubbad weerar deg deg ah oo ay soo qaatay uu Suarez ku dhalin gaadhay goolka labaad laakiin markale ayuu Buffon muujiyay inuu goolhaye heer caalami ah goolka Juventus ugu jiro.
Laakiin Juventus ayaa hurdada ka kacday waxayna goolkeeda barbaraha la timid daqiiqadii 55 aad waxaana goolka u dhaliyay Alvaro Morata kaas oo ciyaarta ka dhaliyay barbaro 1:1 ah. Marchisio ayaa ciyaarta sheekada soo bilaabay isaga oo cidhib kubbada ku siiyay Tevez kaas oo kubbada si xoogan ugu darbeeyay goolka Barcelona, waxaana kubbadiisa badbaadiyay goolhaye Ter Stegen laakiin kubbadii ka soo booday ayuu Morata goolka kudhaliyay.
Daqiiqadii 72 aad ayay ciyaartu u muuqatay inay soo dhamaatay oo ay Barcelona heshay goolkii saddexaad kadib markii uu Neymar gool udhaliyay laakiin dabaal dega goolka ayaa la soo gaabiyay kadib markii calan waduhu tilaamay inay Neymar uu kubbada gacanta ku taabtay go’aankaas oo ahaa mid sax ah.
Ciyaarta ayaa sii adkaatay iyada Allegri uu bilaabay inuu weerarkiisa wada isticmaalo, waxayna Juventus dhamaadkii ciyaarta dadaal badan ugashay sidii ay goolka barbraha ula iman lahayd waxaana fursada ugu fiican helay Tevez balse difaaca Barcelona ayaa u muuqday kuwo dadaal badan samaynayay.
Laakiin intii lagu jiray shan daqiiqo oo ciyaarta lagu daray ayay Juventus doonaysay inay ciyaarta waqtiga dheeriga ah ay u dirto oo ay goolka barbaraha la timaado waqtiga geerida laakiin markii uu garsooruhu doonayay inuu ciyaarta dhameeyo ayayay Messi, Neymar iyo Pedro soo qaadeen weerar lagu jabay kaas oo Juventus dhulka ku sii jiiday, waxaana goolka saddexaad halkaas ku dhaliyay Neymar ciyaarta ayaana ku dhamaatay dabaal dega Neymar goolka uudhaliyay.
Ugu danbayn ciyaarta ayaa ku dhamaatay 3:1 ay Barcelona ku dubatay Juventus isla markaana ay ugu guulaysatay Champions Leaque-ga. Barcelona ayaa xaqiijisatay inay xili ciyaareedkan tahay boqoroda Yurub kadib markii ay noqotay kooxda kaliya ee saddexdii koob ee ay u tartamaysay ku guulasatay.Andrea Pilro ayaa oohinta xejisan waayay waxayna Barcelona ku guulaysatay koobkeedii shanaad ee Champions Leaque-ga.